Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ejegharị na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ejegharị na Europe
Were ya na ị na-eme atụmatụ ịga European Union n'oge ọ bụla. Na ikpe, enwere usoro aro na ozi njem dị oke mkpa nke ahụ ga-enyere gị aka ime ka ahụmịhe gị na-atọkwu ụtọ. Otu nwere ike iche na enweghi ike inwe ezigbo ndiiche na echiche dị mkpa iji gaa Europe jiri ya tunyere ebe ozo n’uwa. ka, n'ime nnukwu ndọtị ya, e nwere usoro nke usoro iwu iwu ị ga-achọ ịbanye na Europe dịka njem nleta. Ọzọkwa, oke ugwu, Nkwupụta, na omenala ihe dị mkpa iji buru n'uche ebe ahụ.
1. Ga Europe: Jidere Aka Gị Paspọtụ
Paspọtụ bụ nchegbu bụ isi ebe ọ ga-abụ kaadị ngosi gị na igodo mba gị na-anata. Anyị ga-ebu ụzọ lekọta paspọtụ ahụ. Ọchịchị gị nke ga-ekpebi mba ndị ị ga-abanye na-enweghị ike ịhazi ụdị akwụkwọ ọ bụla pụrụ iche. Ọ kachasị mma ịlele ma ụlọ obibi gị na ebe ndị embassies nwere nkwado mmekọrịta mba ọzọ ma ọ bụ nkwekọrịta n'oge ị na-eme njem. Imirikiti mba sitere na America na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia enwebeghị ike ịchịkwa ọtụtụ mba na Europe.
Mgbe m kwuchara nke a, ọ bụrụ na nke ahụ abụghị ikpe; nweta onye ndumodu nke iwu ga - eduzi gị mgbe ị na - akwado ikike njem gị. Could nwekwara ike ịchọrọ asambodo ahụ ike na ndị dị otú ahụ ka enyere gị ohere. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwọ ụgbọ ala mgbe ị nọ mba ọzọ, ị ga-achọkwa ikikere ọkwọ ụgbọ ala mba ụwa. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụ ahịa, enwere ike ịnwe ọtụtụ ikike mba ụwa ndị ọzọ achọrọ iji gaa. Nwere ike ịlele nke ederede dị mkpa dabere na ebumnuche njem gị na weebụsaịtị gọọmentị mba nnata.
2. Mụta ịkwado ya
Europe bụ nnukwu na iche iche kọntinent, site na mmiri anwụ na-acha Andalucia na Spen ruo n’ebe ọwụwa anyanwụ Tundra nke snow na-ada. Ọ dị oke mkpa iburu ọnọdụ ihu igwe n'uche na ihe omume ị ga-eme atụmatụ ịme na mba ofesi. Cheta na ịkwakọtaghị na ị ga-akwaga obodo gị, ewela oke ma ọ bụ obere; nke a ga-eme ka ị ghara ida obere oge ịtụtụrụ uwe, -enyere gị aka n'ụzọ ụgbọ elu, na ọbụna azọpụta gị ego site na-ezere ụgwọ buru oke ibu. Nke kachasị mma ịhazi akpa njem gị ma ọ bụ ụdị akpa ndị agha, na-akpụgharị uwe ogologo ọkpa gị, uwe elu, sọks, na uwe ime dị ka croissant na-etinye ha niile na oké megide ibe. Nke a na-egbochi nsogbu nke ịkwa uwe gị ma chekwaa gị ohere iji dabara ngwaahịa ọcha ma ọ bụ ngwa elektrọnik. Ndụmọdụ a bara uru ma ọ bụrụ na ị na-achọ iweta uwe ị zụtara na njem ahụ. Ndụmọdụ ọzọ dị mma bụ iburu akpa maka onyinye gị ma ọ bụ ịzụ ahịa.
3. Ga Europe: Mee ka ụlọ akụ gị mara na ị ga-anọ n’èzí ma na-emefu ego
Mgbakasị ahụ na-eme ka kaadị akwụmụgwọ kredit mere na afọ ole na ole gara aga mere ka ụlọ akụ ghara ịkpachara anya banyere ihe egwu ahụ. Ọ duru ha ka ha guzobe mgbochi nke mbụ na-ajụ mgbe emechara iwu mgbe ha hụrụ kaadị akwụmụgwọ na-eji na mba aghara. Ga-egosi na-onye gị akụ ma ọ bụ na-enye ha a oku na-aga ebe ọ bụ na online sometimesma Ọkwa mgbe ụfọdụ adịghị etinye n'ime akaụntụ. Inweta ndokwa a ga-ezere ahụmịhe na-emerụ ahụ na ihere mgbe ị na-azụ ahịa. Ọ bụrụ n ’ụlọ akụ, ọ dịkwa mma ka ị nweta ego mpaghara ebe ị nọ. A na-akwụ ụgwọ ego mgbanwe maka nzuzu maka ndị njem nleta n'ọtụtụ ụlọ ahịa Europe na mgbanwe mgbanwe.
4. Ga Europe: Ntughari
Ọ bụrụ na ị na-aga "Old Continent,”Cheta iwere akwụkwọ gị ma kwụọ ụgwọ maka ụdị ikike mba ofesi ọ bụla achọrọ. Kinddị mpempe akwụkwọ a dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga mba dị iche iche n'ime iwu Europe. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem n'okporo ụzọ, ọ dị mkpa ịnweta ikikere ọkwọ ụgbọ ala mba ụwa ma zere ịdebanye aha. Ọzọkwa, cheta tinye obere ma tụlee ihu igwe na ihe omume ị ga-atachi obi na mba ọzọ. Na-ekwukarị mgbe niile mba ndị ị na-eme atụmatụ imefu ego ma mee naanị mgbanwe ego na naanị ụlọ ọrụ enyere ikike. Egbu, ị na-akpọtụrụ ndị dị iche iche, oriri, ọdịbendị, echefula inwe ntụrụndụ ma nwee ọ theụ ahụmịhe ahụ.
Ugbu a ị marala ihe niile ịchọrọ ịma, anyị na Save A Train, dị njikere inyere gị aka na mkpa ụgbọ oloko gị niile.
You chọrọ Embed anyị blog post “Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Njem Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feverything-know-traveling-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
European Union eurotrip ihe omuma NjemToEurope traveltips